Shaqaaleynta loo jeedo GIS. Qodobbada iyo xaqiiqda dhabta ah - Gofumed
Shaqaaleynta loo jeedo GIS. Qosol iyo xaqiiqda
Sebtember, 2017 Geospatial - GIS, egeomates My
Ka dib markaad akhrisato maqaal ka bilaabma adiga oo weydiiya waxa loo shaqeeyayaasha GIS dhab ahaantii raadinaya, waxaan la yaabay ilaa xadkee gabagabadan xadidan waddankeena asalka ah ee xaqiiqda laga yaabo in uu isku mid yahay ama ka duwan yahay (laga yaabo inuu ka duwan yahay) adiga.
'Cuntada' oo loo isticmaalo daraasaddan ayaa ahayd dhammaanba shaqooyinka GIS ee lagu daabacay siyaabo kala duwan oo ah helitaanka dadweynaha. Deeqahaas oo ay gacan ka geysteen 'ugaarsiga madaxa' kuma jiraan sababo gaar ah oo ka mid ah baaxaddooda.
Ereyada waxaa loo isticmaalay in lagu diiwaangeliyo shaqo raadinta saddexda bog ee ugu caansan New Zealand. "GIS, Juqraafiga, Goobta, Goobta, Juqraafiga" waxay ahaayeen erayada loo adeegsaday ujeeddadan.
Marka ogeysiisyada la diiwaangeliyey, xogta la uruuriyay ayaa la sifeeyay, tirtiray kobcin iyo 'wax xun'. Kadib, ogeysiis kasta oo astaamaha lagu weydiisto booska loo baahan yahay ayaa la soo saaray. Sifooyinka la soo saaray iyo ka dibna lagu keydiyay:
Title ee bixinta shaqada
Cinwaanka ay sameeyeen shirkadda codsadaha
Qaybta ugu weyn ee shaqada ee warshadaha dalbadaha
GIS sida shuruudaha ugu weyn ama sare ee shaqada loo codsaday
Xirfadaha Farsamada ee looga baahan yahay heerarka software
Goobta jagada iyo,
Waxaan ka helnaa arrin aad u muhiim ah in la joojiyo halkan iyo muujiyo mawduucyo ka hor si loo soo bandhigo natiijooyinka daraasadda. Aynu aragno:
'Warshadaha GIS' oo leh aragti gundhig ah iyo jahwareer
"Mid ka mid ah sababaha aan u sameeyay daraasadani waa sababta oo ah waxaan rabay in aan yeesho hab xallin leh si loo go'aamiyo qaab-dhismeedka warshadaha GIS ee New Zealand. "ayuu qoray wargayska Nathan Heazlewood, oo ah qoraaga daabacaadda taas oo aan ka wada hadalnay. Iyo halka ay in our article "Suurtagalnimada badan"Waxaan isku dayeynay inaan cadeyno fikradda, waxay u muuqataa in ereyga hadda weli waxay soo saaraan shaki badan.
Ogow in labadii qodob ee aan qaadan doono tixraaca ay yihiin qoraa isla iyo sanadkan, 2017. Markaa kadib ayaan ku dhajin doonaa, ogolaanshahaaga, nooc ka mid ah falanqaynta falanqaynta sababtoo ah, sida aad uga goosanayso akhrinta, dhammaan waa isku xiran yahay.
"Ganacsiga GIS wuxuu noqon karaa mid jahwareer leh. Waa mid adag "waa weedho ay Heazlewood ka bilaabeyso boostada"Qabiilada weyn ee warshadaha GIS" Oo wuxuu ku sii socdaa, "Jahwareerku marnaba ma wanaagsana." Dhibicda koowaad. Ma leenahay fikrad cad? Haddii aysan ahayn, taas oo ah mid aad u macquul ah, sida loo helo ereyga aan ku dhajineyno aagaga shaqada iyo tan runtii noo ogolow oo dhan fahamsanahay inaanu u jeedno?
Nathan Good wuxuu qeexayaa ereyada aan inta badan isticmaalno: 'GIS Industry', 'Space', 'Geomatics', 'Geospatial', 'Sayniska Sayniska', 'Qeybta gaarka ah ee Juqraafiga' iyo ugu dambeyn 'qaar kaleba' ( Xasillooni!). Kee iyaga ka mid ah ku habboon ka fiican?
Tani ma aha dood yar oo laga yaabo inay ka fekeraan. Sababtoo ah arrintani waxay abuureysaa shaki weyn oo saameyn ku yeelan doonta saddexda shaqaale ee loo adeegsanayo: magaca shaqada loo baahan yahay, ilaa heerka GIS uu yahay shuruuda ugu muhiimsan ama heerka labaad ee shaqada iyo waa maxay qaybta aasaasiga ah ee shirkadda codsade. Aan sii wadno.
Jacaylka macaan ee koobabka
Si fudud u qabsadaan qayb yar oo ka mid ah koob oo kala duwan oo loo isticmaalo si loogu magacaabo "aagga professional" daraasadda of Heazlewood in ay ogaadaan sida murugsan in ay tahay nooc ka mid ah 'horyaal kaymaha iyo madaahibta':
Inay noqoto tallaabo ka fog inaan ku nuuxnuuxsanno, nasiib wanaag, waxaan xasuusineynaa maqaalkan "Qabiilada weyn ...". Taasna, Heazlewood wuxuu isku dayaa in uu sheego shaqada shaqada ee aad u faa'iido badan leh, taas oo ah fikradaheena, waxay naga caawineysaa inaan si fiican u cadeeyno cabsida this panorama.Dhibicda labaad. Sure, kaadhadhka ganacsiga ee waa inay ahaadaan fikiri a suuq shakhsi wanaagsan oo aad doonaysaan si ay u soo bandhigaan nafteena dunida ee sida ugu wanaagsan, waxay bilaabaan in ay curiyaan kala duwan ugu fiican: the 'graduate', ee 'yar' iyo dabcan 'sare'. Ma laga yaabaa in qof si cad u sharaxdo baaxadda iyo xadka mid kasta magaacabyada la muujiyay? Waaisku dhafan'hawlaha qaar ka mid ah? Su'aal fiican! Waxaan soo jeedinayaa dib u eegis miiska dhamaystiran oo daabacay qoraaga iyo sidoo kale miiska isku dhafan isaga oo ku salaysan ma ahan oo keliya cilmi-baarista la sameeyay, laakiin sidoo kale, waxa ka sarreeya, khibradiisa ballaaran ee degaanka.
"Waxa aan soo gabagabeyn karaa waa in ay jiraan afar qabiil oo waaweyn oo ku jira warshadaha GIS:
(2) '' ... sawirada '
Isticmaal shaxan, iskuday inaad naga caawiso fahamka fikraddaada:
Isku day inaad hadda 'sharaxaad faahfaahin' ah:
"(1) The '... Gists' asal ahaan yihiin qaar ka mid ah falanqeeyayaasha waaweyn iyo dadka isticmaala xogta GIS in ay diiradda saaraan falanqaynta cilmiyaysan (halkan ka badan oo horyaal shaqo ay ku dhamaadeen '... wajibaadka'). Waxa kale oo ku jira (ama waxaa ku jiri kara) noocyada kale ee falanqeeyayaasha.
(2) 'Sawir qaadayaasha' waa dad diirada saaraya bandhigga ama matalaadda xogta juqraafiyeed, sida sawirqaadeyaasha iyo 'qaraabada'.
(3) Cabirayaasha waa kuwa soo ururiya xogta juqraafi iyagoo isticmaalaya qalabka cabbirka iyo qalabka muuqaalka labadaba.
(4) 'Techies' oo u shaqeynaya nooc ka mid ah isdhexgalka u dhexeeya warshadaha GIS iyo teknolojiga. U dirista halkan horumarinta GIS iyo asxaabtooda. "
Taas ka dib markaan si fiican u fahanno (fahamkayaga) sharraxaadda, muuqaalka guud ee la caddeeyay, ma aha? Aan ku laabano falanqeynteena.
Darajada saddexaad. Waxyaabaha kale ee daneynaya falanqaynta
En booska koowaad, Sidee, iyada oo loo marayo cadeyn fudud, waxaa suurtagal ah in la go'aamiyo haddii GIS waa ama ma aha qaybta shaqada ee aasaasiga ah ee shirkadda codsadaha?
Tani maaha mid aad u fudud in la go'aamiyo ahmiyadda, wuxuu sharxayaa Heazlewood, ka dibna faahfaahin:
Waxaa jira ururo inkasta oo ay si cad u soo bandhigaan sawir ganacsi oo diiradda saaraya aag gaar ah, waxay dhab ahaantii siiyaan adeegyo in kabadan hal warshad. Kani waa kiisaska shirkadaha madaniga ah ee bixin kara adeegyo warshadaha ka mid ah dhinacyada isgaarsiinta, adeegyada iyo dhismaha.
Waxaa jira ururo karaa 'taam' galay qaybaha kala duwan, sida laga yaabo in ay dhacdo ka mid ah Wasaaradda Gaadiidka lagu tilmaami karo in ay category Dawladda Dhexe, laakiin waxaa laga yaabaa in sidoo kale si aad u wanaagsan loo kala saari gudahood warshadaha gaadiidka.
Labada xaaladoodba waa falanqaynta falanqeeyaha, ku salaysan khibradaada, kaasoo go'aaminaya go'aanada uu u arko habboon.
En booska labaad iyo u-fiirsashada dhammaan, maxay yihiin ama maxay yihiin xirfadaha farsameed ee looga baahan yahay heerka barnaamijka ee ku xusan ogeysiiska shaqada ee GIS? Halkan, qoraagu wuxuu ku fidaa wax yar:
Waxaa looga fogaaday in la tixgeliyo 'qoysaska alaabooyinka' waxaana ay mudnaan u laheyd alaabooyinka barnaamijyada qoyska ee loo baahan yahay, tusaale ahaan AutoCAD halkii ay ka ahayd CAD.
Dhinaca kale, 'qalabka la xiriira' ayaa lagu daray falanqaynta sida SQL ama HTML. Tani waxay leedahay wax badan oo macquul ah. Waxayna naga caawineysaa in aan si fiican u qiyaasno waxa uu suuqa dalbado.
Waxaa la fahamsan yahay in qaar ka mid ah ogeysiisyada lagu qeexay in ka badan hal nooc oo software ah. Waxaa laga yaabaa in ay rabto in ay shaandheyn u sameyso oo qaybiso dadweynaha daneynaya. Halkan waxaan tusaaleynaynaa tusaalahan qoraaga qoraaga, laakiin hubaal waa in ay noqdaan kuwo la yaqaan meelaha gudahooda. A nooc ka mid ah baaritaanka aqoonta, halkan waxaan tagnaa:
"Waxaan nahay shirkad la shaqeysa ... (hadal ahaan, hadal ahaan, haddaba waxay timaadaa xiisaha) a) Waxaan fileynaa faham muhiim ah html5, css3 iyo waaya-aragnimada luqadda server-ka, b) Fahamka fikradaha soo socda waa lagama maarmaan: Qiyaasood, cdn, xss, aqbali madax, DDD, CQRS, TDD, nasasho, dhacdo qayblibaaxna, baararka sub, microservices SOA, MVC, mvvm, IOC, qalalan ADAG y YAGNI"Istaag, taagan, waan sii wadeynaa:" Waxaan isticmaaleynaa coffeescript, svg, d3, crossfilter, velocityjs, buugyarahan, momentjs, bootstrap, ka yar, nodejs, margan, redis RabbitMQ, expressjs, isteerinka, oauth2, passportjs iyo docker... ". Hadda dhibicda ugu dambeysa (si fiican ayaa loo bilaabay halkan "c) Qaarkood aqoonta Naqshadaynta sawirrada webka y Teknooloojiyada GIS«.
Ogow in ay sheegayso "aqoonta qaarkeed ee GIS", Miyaanay rabin khabiiro? Waxay u muuqataa in 'khibrad'kuma jiraan waxyaabo badan oo GIS ah ... si ka fiican ayaan uga tagnaa oo aan sii wadnaa.
31%% xayeysiisyada uma baahna software kasta oo gaar ah (waxay kaliya yiraahdeen waxyaaba "waa inay ahaadaan kuwo aqoon u leh GIS"). Tani waxay u muuqataa in ay tahay dhinaca kale ee dheelitirka. Iyo arrin si sax ah ka tarjumaysaa qoraaga: "Ma noqon kartaa kalsoonaan karo saadaaliyay digniin kuwanu waa sababtoo ah shaqo-u qaadan in haddii aad ogtahay GIS a, og yahay oo dhan, ama haddii loo shaqeeyayaasha ma taqaanid gaar xirfadaha ay doonayaan". Su'aal aad u xiiso badan, sax? Sida loo ogaado?
Shaxda muujinaya farsamooyinka software loo qaabeeyey sida ugu badan wakhtiyada lagu magacaabo mid kasta oo ka mid ah ogeysiisyada saamiga 140 ayaa la socota falanqayntan:
Sababtoo ah muhiimada ay leedahay, waxaan u oggolaanay inaan ku muujinno miis, tobanka (10) qalabka sare ee loo yaqaan "
Qalabka Tirada hadalada
En booska saddexaad, mushaarka. Xasuuso in daraasaddaan loogu talagalay New Zealand. Lacagtaas, Dollar New Zealand (NZD), waxay leedahay u dhiganta 1 NZD = 0.72 USD (Doolarka Maraykanka). Waxa intaa ku daray in, isagoo kala duwan ee kasta xaqiiqada dalka, waxaan u qaadan kartaa oo kaliya sida xogta tixraaca ah. In sawirka ka muuqata, 'k Hubaal muujinayaa' kumanaan ':
Point Four. Xaqiiqda iyo sheekooyinka. Digniinta si loo xusuusto
Waxay u muuqataa caddayn in wixii cilmi baaris ah ee lagu soo bandhigay dadweynaha iyo sidoo kale (iyo laga yaabo in mudnaanta koowaad) gabagabada laga yaabo in ay ka soo baxdo taas waa in la caddeeyaa culeyska sayniska oo la caddeeyo run ah. Heazlewood wuxuu muujinayaa cabsidiisa ku saabsan waxuuna ka digay:
U digtoonow markaad aragtid 'fikrado' iyo 'xaqiiqooyin kala duwan'. Waa inaan awoodnaa inaan aqoonsanno 'khabiirada' kuwaas oo saadaashoodu aysan ku saleysneyn caddayn halis ah laakiin halkii loogu talagalay xayeesiinta subliminal ee shirkadaha ay matalayaan.
Ka feejignow 'fikirka ra'yiga'. Kuwa sahan ah 'si iskood ah' inta badan ay ku guuldareysato inay u sameeyaan baarka run wakiilka of warshadaha, kaas oo natiijada waxay keeni kartaa in gabagabada khalad.
milicsiga Tani dhamaado isagoo soo jeediyay in waxbarashada oo dhan ee noocan ah waa in ay ka guuraan oo ay 'xogta il' (sida uu sameeyo) maxaa yeelay dadka kale in qaban karo falanqaynta isku mid ah iyo Hubi in ay suurtogal tahay in la gaaro gabagabada isla.
Dadka udubdhexaadka ah ee daraasadda iyo talooyinka ku-meel-gaadhka ah
Qoraaga muujinaysaa macallinkaaga iyo / ama qalin mentor iyo ardayda of GIS. Waxay u sheegeen in "inta badan waxay leeyihiin aqoon aad u yar ee warshadaha oo ay ku saabsan in ay galaan si siman halmaansanyahay waxay fursado shaqo iyo koorsooyin / cilmiga waa in ay sii wadaan si loo hagaajiyo fursadahaaga shaqo helista ay yihiin." Waxaas oo dhan waxay ahayd sababta oo dheeraad ah oo baadhitaan oo aynu ka hadalno.
Jaahilnimadaani waxaa ku xusan dhalinyaradu waa xaqiiqo muuqaal ah. Sidaa daraadeed, waxaan ku adkeyneynaa oo ku waafaqsannahay qoraaga ku saabsan muhiimada ay leedahay inaan la shaqeyno macluumaad la isku halleyn karo oo noo ogolaanaya in aan ku gaarno gabagabo iyo xaqiiqo dhab ah.
Iyo sida qof kasta oo khabiir ah uu ka walaacsan yahay abuuritaanka waxyaallaha iyo ardayga akhriska shaqadooda waa inaadan walwal gelin ku saabsan ogaanshaha iyo codsiga dhammaan kuwii odhan jiray in ogeysiiska shaqada guuriyeen iyo khadadka celin ilaa qalab, taas oo soo saaray caymiska dheeraad ah ee Pang badan ah. Ka dibna wuxuu ku darayaa in ay ka waaban doonto in ay wadaagaan iyo guuriyeen, isakoo: ". Haddii aadan magacabay ALL awoodaha, welwelina" Si kajan ah ku dar: "Waxaan kaliya maqlay qaar ka mid ah marka la eego kuwa aan goobta". Qodobka shanaad in si aad ah loo tixgeliyo.
Oo waannu nimid. Waxaan halkan ku muujinaynaa kuwa kaliya ee noo ogolaanaya mar dambe faallooyinka guud:
Un 53% ee ogeysiisyada la daabacay waxay qaataan GIS si ay u buuxiyaan shuruudaha loo codsaday boostada, halka a 47% waxay diiradda saareysaa GIS-ga oo ah qayb muhiim ah ee codsigaaga.
Hay'adaha dawladda hoose waxay bixiyaan saddex jeer jibbaar ka badan kuwa hay'adaha dawladda dhexe.
15% shaqooyinka GIS waxay la xiriiraan gaadiidka, saadka ama dhalmada.
Maalin kasta ogeysiisyada shaqada lagu daabacay GIS ee New Zealand.
Hadaladii ugu dambeeyay
Waxaan cadeyneynaa in xaqiiqda dal kasta uu ka duwan yahay. Si kastaba ha ahaatee, ma joojin karno naftaada, oo ku saabsan deegaankayaga:
Intee in le'eg GIS loo baahan yahay sida qeybta aasaasiga ah ee shaqo-bixinta?
Iyada oo ku xiran qaybta siyaasadeed iyo juquraafiyeed ee deegaankaaga, meelaha ay ka mid yihiin qaybta dowlad-dawladeed ama qaybta gaarka loo leeyahay ayaa ah qorshaha ugu weyn ee shaqada ee GIS soo saartay?
Maxay yihiin goobaha warshadaha ee ugu baahida xirfadlayaasha ee GIS?
Meeqa jeer ayaa shaqooyinka GIS ay u muuqdaan kuwo ka muuqda warbaahinta kala duwan?
Su'aalaha jawaabahooda ay tahay inaan ku dadaalno inaan helno. Sidaa daraadeed waxaan mawduucan ku soo gabagabeynaynaa su'aasha ah in aan rajeyneyno in ay noqoto mid ka mid ah qodobada soojeedinta shakhsiga:
Miyaad ka warqabtaa xaqiiqada warshadaha GIS iyo fursadaha ay ku leeyihiin qaaradda ama kuwa aan ka midka ahayn ee aad ka tirsan tahay?
Post Previous«Previous Available Available - Template si loo bedelo UTM isku-duwaha si Geographic
Post Next Live - Hurricane Irma - Bulshadu waxay u egtahay in ay la falgaleyso geospatialNext »
Hal Jawaab u Jawaab "shaqo-ujeedka GIS-ga. Qodobbada iyo xaqiiqda dhabta ah "
Miguel A. Martinez Yordan isagu wuxuu leeyahay:
Maqaal aad u fiican. Baadhitaan aad u wanaagsan iyo falanqayn natiijooyinka oo gabi ahaanba waan ku raacsanahay waxa halkan ku xusan. Waxaan dhaleeceynayay magacyada boosaska internetka laga codsaday maadaama ay keenayaan jahwareer ka badan caddeynta. Fikradda Falanqaynta Spatial waa la lumiyay oo waxaa lagu beddelay 'horumariye' ama 'Programer'. Waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo ogaanshaha GIS laakiin waxaa loogu talagalay in aan khabiiro ku noqonno barnaamijka iyo maamulka shabakadda. Waxaan u maleynayaa in la joogo waqtigii GIS lagu sharciyeyn lahaa laguna sharciyeyn lahaa waaxyada joqoraafi caalami ahaan.